CHIN Archives - MATUPI TIMES OLTHANG
CHIN May 28, 2020
Paletwa rhal akah uthae dongah khodaeng aka ming na taeng ah kacet tih kamik neh rhep ka hmuh. Buhthong ham om pawh. Rhotoi adam uh. Angen loh anhlaeng anadam uh. Tenen te om…
CHIN May 12, 2020
( Help4Forgotten Allies ) rhoek kah tun ah Committeeakasai na, ram ham la khoaka poek na loh (Volun­teer) banglaapoek u tih pumaka pae na loh…
CHIN April 20, 2020
တီးတိန်မြို့ကို Lock Down ချရန် ပြည်နယ်အစိုးရ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ
COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိလူနာ ၄ ဦးရှိသည့် ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့တွင် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် အနေဖြင့် Lock Down ချရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စည်ပင်၀န်ကြီး ဦး စိုးထက်ကပြောသည်။ စည်ပင် ၀န်ကြီး ဦးစိုးထက်က “တီးတိန်၊ တွန်းဇံ၊ ကပ်တဲလာ်း၊ တွီးထန်ကို အလေးထားပြီး ဒီတိုင်းပဲ ဆက်ထားဖို့ ရှိသေးတယ်၊ ၁၄ ရက်ပြည့်တိုင်း လွှတ်ဖို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ lock down…
CHIN April 12, 2020
Chin ram Paletwa Peng Sami khokhui Rhai Nah ATong
March 28, 2020; Chinram Paletwa peng Samin kho khui kah Chin pilnam rhainah atong nadong ah Chin land today media rhoek taemrhai na neh March27, 2020 hnin atah Matupi lamkaloh Samin la cet utih mincang…
CHIN April 1, 2020
ကမဘြာ့ကပရွောဂါဖှဈသည့ွ Covid-19 ဖှဈပှားနခှေိနွ ခငွှးပှညနွယအွတှငွး ပှညပွမှ ပှနလွညဝွငရွောကလွာသည့ွ နိုငငွံခှားသားဦးရေ ၄၆၉ ဦးခန့ရွှိကှောငွး လဝကစာရငွးအရ သိရသညွ။ ခငွှးပှညနွယအွတှငွး မှို့နယအွလိုကွ ပှညပွမှ ဝငရွောကသွည့ွ စာရငွးတှငွ တီးတိနမွှို့တှငွ ပှညပွမှ ဝငရွောကလွာသူ ၁၄၅ ဦးခန့ရွှိပှီး ဟားခါးတှငွ ၁၆ဦး၊ ထနတွလနတွှငွ ၃၈ဦး၊ ဖလမွးတှငွ ၇၂ဦး၊ တှနွးဇံ ၂၅ဦး၊ မငွးတပတွှငွ ၉၉ဦး၊ မတူပီတှငွ ၂၈ဦး၊ ကနပွကလွကတွှငွ ၁ဝဦး၊…
သံသယလူနာအဖွဈကလေးပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ပို့ဆောငျခံရသည့ျ ခငြျးပွညျနယျ၊ တီးတိနျမွို့နယျ နှင့ျ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ ကလေးမွို့နယျ၊ ခငြျးစုရှာအနီး၊ ဇိုနှမျးဇနျကြေးရှာတှငျ နထေိုငျသည့ျ အမြိုးသားမီးတဈဦးကို စဈဆေးခကြျတှငျ COVID-19 ပိုးမတှေ့ရှိကွောငျး ခငြျးပွညျနယျ၊ ကနြျးမာရေးနှင့ျ ကုသရေးဦးစီးမှှုး ဒေါကျတာ အောငျငှစေံ ကပွောသညျ။ အဆိုပါ အမြိုးသမီးသညျ စငျကာပူနိူငျငံမှ ပွနျလာခဲ့ပွီး ကိုယျပူ၊ အဖြားတကျခွငျးကွောင့ျ သံသယလူနာအဖွဈ စဈဆေးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ခငြျးပွညျနယျ ကနြျးမာရေးနှင့ျ ကုသရေးဦးစီးမှူး ဒေါကျတာ အောငျငှစေံက “ဇိုနှမျးဇနျကြေးရှာက အမြိုးသမီးတဈယောကျကလညျး ပွညျပကနရေောကျလာတယျ၊…
CHIN March 31, 2020
ခငြျးလူမြိုးမြားနထေိုငျရာ ရခိုငျပွညျနယျ မငျးပွားမွို့နယျ ခြောငျးနကျကြေးရှာတှငျ မတျလ(၃၀)ရကျနေ့ကမွနျမာ့တပျမတောျ၏ လကွေောငျးဖွင့ျ ပဈခတျမှုကွငေ့ျ ခငြျးတိုငျးရငျးသား အမြိုးသား (၅၁)နှဈအရှယျတဈဦး သဆေုံးပွီး လူနအေိမျ ၅ လုံးပကြျစီးသှားကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။ ခြောငျးနကျကြေးရှာနေ ဒသေခံ တဈဦးက “မနေ့က ညနေ ၅ နာရီခှဲဝနျးကငြျလောကျမှာ ဖွဈသှားတာဖွဈတယျ။ ကွောကျတာလညျး အရမျးလညျးကွောကျတယျ ။ ဘယျကိုထှကျပွေးရမလဲ တောငျမသိဘူး ။အရမျးလညျး စိုးရိမျတယျ။ ကတြောျတို့အခု စဈမွပွေငျမှာ နနေရေသလိုပဲ၊ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ…
အဓမ္မပြုကျင့်ရန်ကြိုးစားသည့် ဦးလေးအားတူမဖြစ်သူမှ ပုဆိန်ဖြင့် ခုတ်သတ်
ဦးလေးဖွဈသူမှ တူမဖွဈသူအား အဓမ်မပွုကငြ့ျရနျ ကွိုးစားအားထုတျသဖွင့ျ ပုဆိနျဖွင့ျ ခုတျသတျမှုဖွဈစဉျတဈရပျ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ ကလေးမွို့နယျ၊ ပငြျးတောဦးအုပျစု၊ မွောကျခြော ကြေးရှာတှငျ မတျလ (၂၉) ရကျနေ့ညတှငျဖွဈပှားခဲ့သညျ။ မွောကျခြောကြေးရှာမှသဆေုံးသှားသူ၏ ရုပျအလောငျးအား ကလေးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျခဲ့စဉျပါဝငျသူ ဇကမျးလိုက “ သဆေုံးသှားတဲ့ သူရဲ့တူမလေးပွောပွပုံအရဆိုရငျ ည ၁၁ နာရီလောကျဖွဈမယျထငျတယျ၊ အရငျကလညျးသူ့ကို အခုလို လုပျကွံဖို့ကွိုးစားတာမြားတယျပွောတယျ။ နောကျဆုံးသညျးမခံနိုငျတော့လို့ ခုတျလိုကျတယျလို့ပွောတယျ။ ဘယျနှဈခကြျခုတျလိုကျမိလဲဆိုတာသူကိုယျတိုငျလညျးမသိဘူးတဲ့။ ပွညျသူ့ဆေးရုံရဲ့မှတျတမျးမှာတော့ ပေါကျပွဲဒဏျရာ ၇ ခကြျရှိတယျ” ဟုပွောသညျ။…
ခငွြးလူမွိုးမွားနထေိုငရြာ ရခိုငပြှညနြယြ မငြးပှားမှို့နယြ ခွောငြးနကကြွေးရှာတှငြ မတလြ(၃၀)ရကနြေ့ကမှနမြာ့တပမြတောြ၏ လကှေောငြးဖှင့ြ ပဈခတမြှုကှငေ့ြ ခငွြးတိုငြးရငြးသား အမွိုးသား (၅၁)နှဈအရှယတြဈဦး သဆေုံးပှီး လူနအေိမြ ၅ လုံးပကွစြီးသှားကှောငြး ဒသခေံမွားထံမှ သိရသညြ။ ခွောငြးနကကြွေးရှာနေ ဒသခေံ တဈဦးက “မနေ့က ညနေ ၅ နာရီခှဲဝနြးကငွလြောကမြှာ ဖှဈသှားတာဖှဈတယြ။ ကှောကတြာလညြး အရမြးလညြးကှောကတြယြ ။ ဘယကြိုထှကပြှေးရမလဲ တောငမြသိဘူး ။အရမြးလညြး စိုးရိမတြယြ။ ကတွောတြို့အခု စဈမှပှငေမြှာ နနရေသေလိုပဲ၊ ကိုရိုနာဗိုငြးရပဈြ…
CHIN March 30, 2020
ပလက်ဝ ထောက်ပံ့ရေး ဆန်အိတ် ၂၀ အေအေသိမ်း
မြန်မာတပ်မတော်နှင့် အေအေအကြား စစ်ရေးပြင်းထန်လာမှုကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း ပိတ်နေသည့် ဒေသခံများအား ထောက်ပံ့မည့် ဆန်အိတ် ၁၂၀ အနက် အိတ် ၂၀ ကို မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ က အေအေ လက်နက်ကိုင်များမှ သိမ်းယူသွားကြောင်း ခူမီးချင်းမျိုးနွယ်စုများရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဦးကျော်ငြိမ်းက အတည်ပြုပြောကြားသည်။ ခူမီးချင်းမျိုးနွယ်စုများရေးရာ ပေါင်းစပ်ညိုနိူင်းရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဦးကျော်ငြိမ်းက “နိုင်ငံတစ်ကာတွေ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ ပေးလှူနေတဲ့ ဆန်တွေဖြစ်တယ်၊ မိုင်တိုင်…